Bone marrow with an adult - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
👵 လူကြီး နှင့် အရိုးပွခြင်း 🦴
Osteoporosis လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးပွ ရောဂါကို ရင်းနှီးနေကြလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
အရိုးပွ အရိုးပါးရောဂါဟာ အရိုးမှာရှိတဲ့ tissue တွေ လျော့နည်းဆုံးရှုံးလာစေပြီး အရိုးကို ကြွပ်ဆပ် လွယ်စေလာတာကြောင့် အရိုးပွရာကနေ အရိုးကျိုးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလေ အရိုးပွလာလေ ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ အရိုးပွရောဂါကို ပိုမိုကြုံတွေ့ရတယ်လို့ လေ့လာ ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ အရိုးတွေမှာ တည်ရှိနေတဲ့ tissue တွေဟာ ပျက်စီး အိုဟောင်းပြီး အသစ် ပြန်လည်ဖွဲစည်းတဲ့အခါ အရိုးဖွဲ့စည်းရာမှာ လိုအပ်တဲ့ Vitamin D လုံလောက်စွာ မရရှိတာကြောင့် အရိုးအသစ် အစားထိုးမပြုလုပ်နိုင်တော့ဘဲ အရိုးပွပြီး ရောဂါဆိုတာ ဖြစ်ပေါ် လာပါတယ်။ အရိုးပွရောဂါ အလွယ်တကူ မဖြစ်စေဖို့ အရိုးအတွက် အဓိက အရေးပါတဲ့ Vitamin D နဲ့ Calcium ဓါတ် မချို့တဲ့အောင် နေထိုင်စားသောက်ရပါမယ်။
အရိုးပွ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း တွေကတော့-
1. အသက်အရွယ် ရ လာခြင်း
2. Vitamin D ချိုတဲ့ခြင်း
3. Calcium , Meganisium Zinc အစရှိတဲ့ ဓါတ်များချိုတဲ့ခြင်း
4. သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်း
5. နေရောင်ခြည် နှင့် မထိတွေ့ခြင်း
6. ကော်ဖီ သောက်လွန်းခြင်း
7. အရက် ဆေးလိပ် သောက်ခြင်း စတဲ့ အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
📌အရိုးပွ ရောဂါကို ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်သလဲ ❓
– Vitamin D3 D2 ပါဝင်တဲ့ Vitamin D အမျိုးအစားကို တစ်နေ့တစ်လုံး ပုံမှန်သောက်သုံးပေးခြင်း
– နေရောင်ခြည်နှင့် တစ်နေ့ 15-20 မိနစ် ထိတွေ့ပေးခြင်း
– ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းများ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
– Vitamin D ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ စားခြင်း
– ကဖိန်းဓါတ် လျှော့ချခြင်း
– ဆေးလိပ် အရက်လျှော့ခြင်း
– အာလူး၊ငှက်ပျောသီး၊ဒိန်ချဉ်၊ဒိန်ခဲ၊ထောပတ်၊ချိစ်၊တူနာ အစရှိတဲ့ Vitamin D နဲ့ Calcium ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ စားသုံးပေးခြင်း များပြုလုပ်ပြီး စောစီးစွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရိုးပွရောဂါကို ကာကွယ်ခြင်း အားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ များဖြစ်သော အရိုးကြွပ်ဆပ်လွယ်ခြင်း ၊ အရိုးကျိုးခြင်းနဲ့ အရိုးအဆစ် အားနည်းခြင်း ၊ muscle weakness နဲ့ ကြွက်တက် ခြင်းများမှာပါ ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် Vitamin D မချိုတဲ့အောင် နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်နော်။#VitaminD3